November Promotion - Crane-Ultrasonic Cool Mist Humidifier selected items Buy 1 Get 1 Weight Scale (5.11.2020 - 30.11.2020) While Stock Last
1.Humidifier သည်လေထုထဲတွင် Moisture များရှိနေသည့်အတွက်လည်ချောင်းယားပြီး ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ညဘက်အိပ်ရေးပျက်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး ပိုမိုအိပ်ပျော်စေနိုင်ပါသည်။
2.Allergy ရှိသူများကလည်း Humidifier သည် တုတ်ကေွးမိခြင်း၊ အအေးပတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း ထောက်ခံပေးထားပါသည်။ ဆရာဝန်များကလည်း Cool Mist သည် Flu and Cool ဖြစ်သူများအတွက် သက်သာတယ်ဆိုပြီး ဆေးပေးမည့်အစား Crane Cool Mist ကိုအသုံးပြုသင့်သည်ဟု recommend ပေးထားပါသည်။
3. တစ်ခါတစ်ရံ ဖြစ်တတ်သည့် မရပ်မနားလည်ချောင်းယား၍ ဆိုးတတ်သော ချောင်းကိုပါ သက်သာစေနိုင်ပါသည်။
4. ကလေးငယ်များ၏ အသားအရေသည် လူကြီးများထက် ၂ ဆပိုမိုနူးညံ့၍ ပိုမိုခြောက်သေွ့လွယ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးငယ်များ၏ နူးညံ့တဲ့အသားအရေအတွက် Humidifier အကိုအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ Skin Rush နှင့် Eczema ရောဂါများကို လည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
5. မေွးကင်းစမှ ၆ လလောက်ထိ ကလေးငယ်များသည် ပါးစပ်နှင့် အသက်မရှုသေးပဲ နှာခေါင်းတစ်ခုထဲဖြင့်သာ အသက်ရှုတတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှုဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ကလေးငယ်များအတွက် Humidifier သည် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
6. Nose Block,Nose Bleed, Score Throat နှင့် လူကြီးများအတွက် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးသည့်အခါ နူတ်ခမ်းကွဲပြီးလည်ချောင်းခြောက်တတ်ခြင်းများကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ရာတွင် ရှာလကာရည်ဖြင့် လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
tracker id:3#5880
Crane-Ultrasonic Cool Mist Humidifier-Train Design EE-7272
175,000 Ks Promotions